Date My Pet » 3 Antony Tsy Mba Raiso ny Puppy amin'ny A Date Voalohany
3 Antony Tsy Mba Raiso ny Puppy amin'ny A Date Voalohany
Last nohavaozina: Sep. 19 2020 | 2 min namaky
Ny roa taona lasa izay, namana nanome ahy ny anarany sy ny nomeraon-telefaonina, ary nilaza fa ilay namany dia nanantena aho hiantso ka hanontanianay izay teniny avy. Nieritreritra aho lalao an-kalamanjana dia ho mahafinaritra daty voalohany. Izahay haka hitsangatsangana, tavoara ny divay, bodofotsy ary mankafy tsara tarehy miaraka hariva fahavaratra. Marina ny tenin'i aho rehetra izay.
Io daty jamba nanjo ahy mifanojo amin'ny Puppy mipetraka ny adorable 10 herinandro Golden Retriever. Nihevitra aho fa izany ihany fa hanampy ny daty ka dia nitondra azy teny. Fa tsy, ny fahafinaretana kely niafara Buddy ho fialamboly. Ireto misy antony telo tsy mba hitondra ny alika amin'ny daty voalohany:
1. Nahazo ny Puppy ny sain'ny maro, izay nanapaka ny resaka
Izahay tsy mahatratra ny tena mahazo an samy. Puppies, na ny biby fiompy amin'ny ankapobeny, Hanombohana ny resaka lehibe, fa midika izany hoe ny olona rehetra te hanontany firy taona izy.
2.Satria nanana Puppy fa tsy ny alika be taona, dia tsy maintsy tsara foana
Nidika izany fa izahay babysitters kokoa ny alika noho ny mpivady eo amin'ny daty miaraka amin'ny mpiara-mitory fahatelo tagging miaraka.
3.Puppy poo dia tsy tena ny aphrodisiac
Raha toa ka manana alika be taona, ny potty fialan-tsasatra dia tsy hitranga matetika ary manana fanaraha-maso bebe kokoa ny fotoana sy ny toerana ireo hitranga.
Tamin'ny faran'ny ny alina, Tsy tena mahatsapa ho toy ny tsy maintsy be ny fahafahana mba hahafantatra ny daty. Avy mitondra ny alika (satria efa tsy nianatra mandeha amin'ny leash mbola) ny fanadiovana niakatra nanaraka azy ny fizarana firy taona izy liana an-jatony olon-tsy fantatra, Tsapako toy ny efa niasa aho nandritra ny alina, fa tsy hahazo ny mahafantatra ny tsara zazavavy. Tsy nisy daty faharoa, fa nianatra lesona sarobidy. Ilaozy ny alika tao an-trano ho daty voalohany.
Resaho ny fomba Dirty amin'ny Fifandraisana